Aqoon isweydaarsiga Gaadiidka ee Ankara. | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraAqoon-isweydaarsi Gaadiidka Ankara ayaa Abaabulay
21 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY
KHUDBADKA 'YAVAŞ' DHAQANKA '
Herkes Qof kasta oo dunida ka mid ah wuxuu arrinta u xalliyaa arrintan si uun. Waan garan karnaa. Waxaan u xallin doonnaa si wada jir ah aqoonyahannada iyo ururada aan dowliga ahayn. Tirada rakaabka ee aan lacag la’aan ku qaadno magaalada Ankara waa 30 maalin kasta khasaarahana waa 630 milyan oo rodol. Waxaan la saxiixnay borotokool duqa magaalada Moscow. Kulankii halkaas ka dhacay, duqa Helsinki wuxuu ii sheegay in nasiib darro aanan ku gudbi karin 85 gaadiidka baaskiilka. Heerkani waa eber boqolkiiba Ankara. Taasi waa sababta aan u bilownay dhisidda dariiqa baaskiilka ee 56 kilomitir. Uma lihin caado inaan ku naqdino maamulladii hore, laakiin gaadiid dad weynaha ayaa lagu dayacay Ankara. 2010, waxaan haysanay 2 kun oo 37 basas ah oo ku xiran EGO. Iyadoo la raacayo Sharciga Magaalada, markii degmooyinka lagu daro, dadweynaha Ankara waxay u dhowaadeen tirada dadka ee 6 milyan. Tirada basaskayaga hadda jira waa kun 540, mid ka mid ahi wuxuu ku socdaa degmooyinka. Sannadka soo socda waxaan iibsan doonaa bas kale oo ah 200 oo leh gaaska dabiiciga ah (CNG) 90. Waxaa jira tareenka magaalada ku xeeran oo mara bartamaha wadnaha ee Ankara oo adeegsada 300 kun 51 qof maalin walba. Ugu yaraan 600-300 kun oo qof waa inay ka faa'iideystaan ​​adeeggan. ”
DIIWAANGALINTA ISBEDELKA EE SAACADAHA OWN EE ANKARA
Isagoo sheegay inay fursad u helayaan macluumaad ku saabsan inta rakaab ah ee sida ugu dhakhsaha badan loogu daabulo iyagoo u mahadcelinaya Basaska EGO, Basaska Gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay, ANKARAY, Metro iyo ugu dambeyn tikidhada smart, marka laga reebo dolmuş ee Ankara, Duqa Yava Ya wuxuu sidoo kale la wadaagay soo jeedintiisa xalka si loo yareeyo cufnaanta taraafikada:
Mashaariicdayada xilliyada doorashada waxaa kamid ahaa in la beddelo saacadaha shaqada ee Ankara. Magaalada Ankara subaxa hore dadku waxay luminayaan taraafikada inbadan. Waxaan isku dayeynaa inaan xalinno mashruucan ku saabsan u wareejinta dadka Ankara lacag la’aan ama lacag aad u yar annagoo badalna saacadaha shaqada ee waaxda khaaska ah, xitaa haddii aysan ugu yarayn qeybta dowladda. ”
Ma jiri doonto mashruuc waalan oo xagga gaadiidka ah
Nihat Alkaş, Maareeyaha Guud ee EGO, wuxuu hoosta ka xariiqay inay qaataan habka maaraynta ka qeybqaadashada siyaasadaha gaadiidka dadweynaha oo ay ku dhawaaqeen inay hirgalin doonaan mashaariicda dhulka yaala halkii laga fulin lahaa mashaariic waali ah:
Uz Waxaan danaynaynaa diyaarinta Qorshaha Sare ee Gaadiidka Mashiinka leh. Sidaas darteed, mustaqbalka magaaladeena, 20 waxay abuuri doontaa qorshe gaadiid sanadle ah oo waara oo lagu xaqiijiyo mashaariicdeena mid mid aragtidaas. Daraasadahayaga farsamada ayaa lagu gabagabayn doonaa Mashruuca Baaskiil Wadada, taasoo ah mudnaantayada. Waxaan ku bilaabi doonnaa Dhismaha Wadada Baaskii in ka yar saddex bilood. Ku dhowaad 45 milyan oo deeqaha TL ah oo laga helo Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa aad muhiim noogu ah mashruucan. Hadda wixii ka dambeeya, waxaan rabnaa inaan u dhaqaaqno dhanka siyaasada gaadiid iyo qaab maalgashi oo buuxiya baahiyaheena, halkii aan ku maalgelin laheyn gaadiidka, kuwaas oo loogu yeero mashaariic waali ah oo u baahan qoondeyn ballaaran oo Kheyraad aan ku habooneyn qaab dhismeedka maaliyadeena. ”
Isaga oo ka hadlaya aqoon isweydaarsiga oo ku soo beegmay Xuska Maalinta Xuquuqda Caruurta ee 20 ee Noofambar, Duqa Magaalada Golaha Magaaladu waa Cagin Aladag wuxuu muujiyey aragtidiisa ku saabsan gaadiidka wuxuuna yidhi: Dhibaato weyn adiga ayey kuu leedahay. Waxaan rabnaa talaabooyin la qaado in lagu xaliyo dhibaatooyinkaas. ”
Dhibaatooyinka Gawaarida iyo Xalka Sanliurfa…